ဆွဲချင်ရာ လျှောက်ဆွဲတတ်တဲ့ ဝါသနာကြောင့် စားသောက်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုမှာ အလုပ်ရသွားတဲ့ ၉နှစ်သား ကလေးငယ် – CHAR TAKE
ဆွဲချင်ရာ လျှောက်ဆွဲတတ်တဲ့ ဝါသနာကြောင့် စားသောက်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုမှာ အလုပ်ရသွားတဲ့ ၉နှစ်သား ကလေးငယ်
27/11/2021char take0 Comments
ကလေးတွေ မှာ ထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုယ်ဝါသနာလေးတွေ ပါလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဝါသနာလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့အခါ အဲဒီကလေးဟာ ထူးချွန်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်။
အခုလည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံက Joe Whale ဆိုတဲ့ ၉နှစ်သား ကောင်လေးမှာ ဝါသနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အချိန်ရတိုင်း စာအုပ်တွေ နံရံတွေမှာ သူ့စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အတိုင်း ပုံတွေလျှောက်ခြစ်နေတတ်တာပါ။
ဒါကို သူ့ရဲ့မိဘတွေက “ဒီကလေး သူများတွေလို ပုံဆွဲတာလဲ မဟုတ်ပဲ ခြစ်ချင်ရာလျှောက်ခြစ်နေတယ် နောက်အဲလိုလုပ်ရင် အရိုက်ခံရမယ်” ဆိုပြီး မဆူခဲ့ပဲ သားဖြစ်သူရဲ့ ဝါသနာကို အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကလေးဟာ အားပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ဝါသနာအတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခြစ်ချင်ရာ လျှောက်ခြစ်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုစိတ်ကူးထဲရှိသလို လျှောက်ခြစ်တာကို doodle art လို့ခေါ်ပြီး သေချာကြည့်ရင် ဆွဲထားတာတွေဟာ သေေ သပ်သပ်လေးရှိနေတာကို မြင်ရမှာပါ။
သူဆွဲချင်ရာ ဆွဲထားတာကို ကျောင်းကဆရာတစ်ယောက်က တွေ့ သွားတဲ့အခါ သဘောကျသွားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကာInstargram မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က လူပေါင်းများစွာဟာ ကလေးရဲ့ ဝါသနာကို ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ထဲမှာ Shrewsbury မြို့ No .4စားသောက်ဆိုင်ကြီးက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မကြာမီမှာပဲ No.4စားသောက်ဆိုင်က သူတို့ရဲ့ ပင်မစားသောက်ခန်းမ နံရံမှာ စိတ်တိုင်းကျသလို ပုံတွေရေးဆွဲပေးဖို့ Joe Whale ကို ဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ကျောင်းဆင်းချိန်တိုင်းမှာ Joe ရဲ့ အဖေဟာ သားဖြစ်သူကို ပုံဆွဲပေးဖို့အတွက် စားသောက်ဆိုင်ဆီ ပုံမှန်ပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။
စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ နံရံမှာ သူ ၁၂ နာရီကြာ ရေးခြစ်ထားတာတွေကို ဆိုင်ကလည်း အလွန်သဘောကျခဲ့ပြီး အဲဒီပုံတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ခဲ့ရာ လူပေါင်း ၁ သန်းခွဲခန့် ကြည့်ရှု့ခဲ့တဲ့အထိ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ Joe ကို Doodle Boyလို့ ခေါ်ကြပြီး မီဒီယာ တွေထက်မှာ နာမည်ကြီးနေပါပြီ။ ဒါအပြင် သူ့ရဲ့ရေးဆွဲမှုကိုနှစ်သက်တာကြောင့် အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ ထပ်မံကမ်းလှမ်းခြင်းကိုလည်း ခံရပါတယ်။
Joe ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ Greg ကတော့ သားဖြစ်သူကို အသက်ငယ်ငယ်မှာတင် သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကို ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းအတွက် အလွန် ဂုဏ်ယူနေ သလို ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ပံ့ပိုးမှုတွေ လုပ်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆို ပါတယ် ။Crd – Thutazone
Unicode … ဆှဲခငျြရာ လြှောကျဆှဲတတျတဲ့ ဝါသနာကွောငျ့ စားသောကျဆိုငျကွီးတဈခုမှာ အလုပျရသှားတဲ့ ၉နှဈသား က လေးငယျ
ဒီလိုစိတျကူးထဲရှိသလို လြှောကျခွဈတာကို doodle art လို့ချေါပွီး သခြောကွညျ့ရငျ ဆှဲထားတာတှဟော သေေ သပျသပျလေးရှိနတောကို မွငျရမှာပါ။
သူဆှဲခငျြရာ ဆှဲထားတာကို ကြောငျးကဆရာတဈယောကျက တှေ့ သှားတဲ့အခါ သဘောကသြှားပွီး ဓာတျပုံရိုကျကာInstargram မှာ တငျလိုကျပါတယျ။ အှနျလိုငျးပျေါက လူပေါငျးမြားစှာဟာ ကလေးရဲ့ ဝါသနာကို ခြီးကြူးခဲ့ကွပါတယျ။
သူတို့ထဲမှာ Shrewsbury မွို့ No .4စားသောကျဆိုငျကွီးက ဝနျထမျးတဈယောကျလညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။မကွာမီမှာပဲ No.4စားသောကျဆိုငျက သူတို့ရဲ့ ပငျမစားသောကျခနျးမ နံရံမှာ စိတျတိုငျးကသြလို ပုံတှရေေးဆှဲပေးဖို့ Joe Whale ကို ဆကျသှယျလာခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ ကြောငျးဆငျးခြိနျတိုငျးမှာ Joe ရဲ့ အဖဟော သားဖွဈသူကို ပုံဆှဲပေးဖို့အတှကျ စားသောကျဆိုငျဆီ ပုံမှနျပို့ပေးခဲ့ရပါတယျ။
စားသောကျဆိုငျရဲ့ နံရံမှာ သူ ၁၂ နာရီကွာ ရေးခွဈထားတာတှကေို ဆိုငျကလညျး အလှနျသဘောကခြဲ့ပွီး အဲဒီပုံတှကေို အှနျလိုငျးပျေါမှာတငျခဲ့ရာ လူပေါငျး ၁ သနျးခှဲခနျ့ ကွညျ့ရှု့ခဲ့တဲ့အထိ စိတျဝငျစားခဲ့ကွပါတယျ။
အခုဆိုရငျတော့ Joe ကို Doodle Boyလို့ ချေါကွပွီး မီဒီယာ တှထေကျမှာ နာမညျကွီးနပေါပွီ။ ဒါအပွငျ သူ့ရဲ့ရေးဆှဲမှုကိုနှဈသကျတာကွောငျ့ အလုပျလုပျပေးဖို့ ထပျမံကမျးလှမျးခွငျးကိုလညျး ခံရပါတယျ။
Joe ရဲ့ ဖခငျဖွဈသူ Greg ကတော့ သားဖွဈသူကို အသကျငယျငယျမှာတငျ သူဝါသနာပါတဲ့အလုပျကို ကြှမျးကငျြသူအဖွဈ လုပျကိုငျနိုငျခွငျးအတှကျ အလှနျ ဂုဏျယူနေ သလို ဆကျလကျပွီးတော့လညျး ပံ့ပိုးမှုတှေ လုပျပေးဦးမှာဖွဈတယျလို့ ဆို ပါတယျ ။Crd – Thutazone